वर्ष खेलाडी अवार्डमा कसको भोट कसलाई ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलवर्ष खेलाडी अवार्डमा कसको भोट कसलाई ?
विराटनगर । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखका स्ट्राइकर रोबर्ट लेवान्डोस्कीलाई वर्ष खेलाडी घोषित गर्‍यो ।
लेवान्डोस्कीले बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी, युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई उछिन्दै फिफा द बेस्टको अवार्ड जित्न सफल भएका ।
फिफाले राष्ट्रिय टिमका कप्तान र प्रशिक्षक तथा खेल पत्रकार र फुटबल समर्थकको मतको आधारमा वर्ष खेलाडी चयन गर्छ ।
लेवान्डोस्कीले ५२ भोट पाउँदै अवार्ड जितेका थिए भने रोनाल्डोले ३८ तथा मेस्सीले ३५ भोट पाएका थिए ।
कसको भोट कसलाई ?
रोनाल्डोले लेवान्डोस्की, मेस्सी र किलियन एम्बाप्पेलाई भोट गरेका थिए । रोनाल्डोले पहिलो भोट लेवान्डोस्कीलाई दिएका थिए भने दोस्रो भोट मेस्सीलाई तथा तेस्रो भोट एम्बाप्पेलाई दिएका थिए ।
यता, वर्ष खेलाडी घोषित भएका लेवान्डोस्कीले भने पहिलो भोट पूर्वसहकर्मी थियागो अल्कान्टारालाई दिएका थिए भने दोस्रो भोट पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)का स्टार नेयमार तथा तेस्रो भोट म्यानचेस्टर सिटीका केभिन डी ब्रुयनलाई दिएका थिए ।
यसैगरी मेस्सीले पूर्वसहकर्मी तथा पिएसजीका स्टार नेयमारलाई पहिलो, दोस्रो भोट एम्बाप्पे तथा तेस्रो भोट लेवान्डोस्कीलाई गरेका थिए ।
यता रियलका कप्तान सर्जियो रामोसले भने पूर्वसहकर्मी रोनाल्डोलाई भोट दिएनन् । उनले पहिलो भोट लेवान्डोस्कीलाई दिएका थिए भने दोस्रो थियागो तथा तेस्रो भोट नेयमारलाई दिएका थिए ।
यस्तै रियलकै खेलाडी लुका मोड्रिकले लेवान्डोस्की, रामोस र मोहम्मद सालाहलाई भोट दिएका थिए । इडेन हाजार्डले पनि लेवान्डोस्की, रामोस र ब्रुयनलाई भोट दिएका थिए । टोटनह्यामका ग्यारेथ बेलले लेवान्डोस्की, ब्रुयन र साडियो मानेलाई भोट गरेका थिए ।
लिभरपुलका डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकले माने, सालाह र थियागोलाई दिएका थिए । स्पेनका प्रशिक्षक लुइस इनरिकले मेस्सी, थियागो र रामोसलाई भोट हालेका थिए ।